Nahazo sazy mihantona ny mpizahatany any UK noho ny fitarainana momba ny fanolanana andian-jiolahim-boto tany Sipra
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nahazo sazy mihantona ny mpizahatany any UK noho ny fitarainana momba ny fanolanana andian-jiolahim-boto tany Sipra
Mpitsidika UK iray 19 taona, izay nilaza fa tsy izy no naolan'ireo vondrona mpizahatany Israeliana 12 tao amin'ny hotely Sipra, dia nomelohin'ny fitsarana any an-tranomaizina efa-bolana.
Nihantona nandritra ny telo taona ilay sazy, noho ilay nantsoin'ny fitsarana teo an-toerana hoe 'fikomiana imasom-bahoaka', ary nisy tovovavy britanika iray nasaina nandoa € 148 amin'ny sarany ara-dalàna.
Nomena “fotoana faharoa” izy araka ny filazan'ny mpitsara Michalis Papathanasiou, izay namaky ny didim-pitsarana. Notarihiny fitsarana nandritra ny telo volana izay nampangaina ho nanao asa ratsy teo imasom-bahoaka ity tovovavy ity taorian'ny nanamafisany ny filazany fa nisy nanolana azy roa lahy mpivahiny israelita tamin'ny Jolay lasa teo.
Niparitaka be tao amin'ny gazety Britanika ny raharaham-pitsarana azy rehefa nipoitra fa voalaza fa noteren'ny mpanao famotorana Cypriot izy hanao sonia fanambarana famerenam-bidy - zavatra nolavin'ny polisy.
London dia nametraka tsindry mafy tamin'ny manampahefana Sipra, niaraka tamin'ny Sekretera vahiny Dominic Raab dia nitaky ny “hanaovan'izy ireo tsara” fa tsy hanasaziana an-dravehivavy.
Mikatso ny tsena iraisam-pirenena indray ny fitomboan'ny fivezivezena any Etazonia
Saint Lucia dia manenjika ireo mpitsidika amin'ny 'saram-pizahan-tany fizahan-tany' vaovao